Durbaannada Dagaal ee Madaxweyne Al Siisi iyo Biyaha Webiga Niil ! – Xeernews24
28. Juni 2020 /in Qormooyin/Articles /von admin
Sabtigii June 20, 2020 ayaa Madaxweynaha Masar Cabdel-Fattax al-Sisi oo la hadlayay ciidamadiisa ku yiri “U diyaar garooba inaad ka fulisaan hawlgal [dagaal] gudaha xuduudda, ama haddii loo baahdo xuduudda dibeddeedaba.” Dacaayadda dagaal ee ujeeddooyinka badan leh, waxay kicisay dareen la xiriira jahada duullaanka.
Colaadda labada dal ayaa u muuqato inay foodda la gashay jar caalami ah, kaddib markii dowladaha xubinta ka ah Jaamacadda Carabta ay wada taageereen mowqifka Masar marka laga reebo Jabuuti, Qadar iyo Soomaaliya (Fanabc 23/06/2020).
Dhawaan waxaa soo baxday in dowladda Masar ay saldhig military ka sameysaneyso xuduuda Konfur Sudaan ay la leedahay dalka Itoobiya. Walow dowladda Juba ay warkaas dafirtay, haddana wariyeyaal soo booqday “Paloch oil fieds” ee ku dhow xuduuda Itoobbiya ayaa sugaya inay soo arkeen cutub militariga Masaarida ah oo halkaas deggan, (SSNewsNow 19/06/2020).
Walow Masar iyo Itoobbiya ay hore u sheegeen inay kalsooni ku qabaan in muranka si nabadgelyo ah lagu xallin doono, haddana khubarada amniga waxay ka cabsi qabaan in burburka wadahadallada iyo dhaqdhaqaaqa gobolka ka socda ay horseedi karaan dagaal. “Masar iyo Itoobbiya waxay ka dhawaajiyeen suurtaggalnimada in la qaado tillaabooyin militari [dagaal] si loo ilaaliyo danahooda,” (DW 22/06/2020).
Biyoxireenka waxuu ballan qaadayaa horumarinka noolasha boqolaal malyan oo degan Geeska Afrika, kuwaas oo baahi iyo jahli ay dunida ka reebay. Itoobbiya waxay si taxddar leh Masar iyo nabaddaba ugu oggolaatay tanaasul, balse talada Masar ee ah in harada biyoxireenka si tartiib tartiib ah loogu buuxiyo 11 sanadood waxay ka dhigan tahay in qayb tamarta ah keliya la soo saaro.
Muran kama taagna in haddii la dhammaystiro biyoxireenka uu ku yeelan doono saameyn biyaha Masar u qulqulaya, balse waxaa loo baahan yahay in caqliga ka qaalib noqdo cudud sheegashada, si xaallada murugsan ee khatarta colaadda dabada ku wadato looga gudbo wadahadal ixtiraam iyo isku hanbeyn ku qotomo. Dhaqaaleyahan George Ayittey ayaa horey u yirin “African solutions to African problems,” xal aan taas ahaynna ma muuqdo.
ITOOBIYA oo mowqifkeeda bedeshay iyo wararkii ugu dambeeyey xiisadda NILE. Xogta Dahsoon Ruushka oo Qabsaday Ceelashii Shidaalka ee dalka liibiya.